Avesta waxeey ku taala markii la raaco wabiga-Dala ee koonfurta Dalarna, waxeeyna uu dhawdahay dabiicada iyo magalooyinka sii weeyn. Dadaalka loo sameeynaayo caruurta iyo dhalinyarada waa badanyihiin. Avesta waxaa ku taalo Verket/Avesta, oo ka mid ah xarunta sawirka caruurta ee Dalarna. Jardiinada isboortiga waa goob isboorti oo lagu tago si lama filan ah, waxeeyn ku xiran tahay Metropooloen Avesta oo ah guriga dabaasha reeerka ee wanaagsan, qeeybaha degmada banankoodna waxaa ku yaalo goobo isboorti oo ka yar taasi oo si lama filaan ah lagu tagi karo.
Agagaarka Avesta waxaa laga helaa fursad waxbarasho oo fiican. Ka akhriso in dheeraad ah bogga degmada.
Degmada Avesta waxaa ku yaalo isbitaal-dhawaan oo leh qaabilaad degdeg ah, oo furan afar iyo labaatan saac. In kale oo ku saabsan isbitaal ka akhriso halkaan.Waxaa jiro ruggag caafimaad oo madaxbanaan iyo kuwo maamulka gobolka maamulo. Ruggagiisa caafimaad waxeey ka hoowl galaan daryeelka koobaad. Adiga ayaa dooraneeysid meesha aad tageeysid markaad jiran tahay. Ruggaga caafimaadka waxaa laga helaa oo ka mid ah daryeelka hooyooyinka, daryeelka caruurta, baxnaaneeynta iyo jimicsiga bukaanka.
Maamulka gobolka iyo daryeel dhibaha madaxa banaan waxeey wada soo bandhigaa daryeel ilko. Sido kale waxaa jirto qaabilaad dhalinyaro. Si aad uu hesho warbixin dheeraad ah oo ku saabsan daryeelka caafimaadka iyo bukaanka Avesta, fiiri bogga degmada.
Basaska xaadaha ee Avesta raacitaankooda waa lacag la'aan. Waa sahlan tahay in Avesta la imaado iyo laga tago ayadoo la raacaayo gaadiidyo kala duwan. Stockholm ilaa Avesta waxeey qaadaneeysaa hal saac iyo bar markii la raaco tareen. Arlanda markii laga soo baxo waa ku dhuwaad hal saac. Si aad uu hesho warbixin dheeraad ah oo ku saabsan gaadiidka xaafadaha iyo gobolka, fiiri Dalatrafik.
Personlig assistent till glad och positiv kvinna i Avesta Personlig assistent
Sjuksköterska Introduktions år , Avd 3 , 10 och Akuten , Avesta Sjuksköterska, grundutbildad
Ledig Komminister Tjänst Komminister
Leg Arbetsterapeut Barn - och ungdomshabiliteringen Avesta Arbetsterapeut
Legitimerad dietist till primärvården i Avesta Dietist
Hjärtsjuksköterska , Medicinmottagningen Avesta lasarett Sjuksköterska, grundutbildad
Projektledare med inriktning Energi , Stora Enso , Fors Produktionsledare, tillverkningsindustri
Lärare i förskoleklass på Markusskolan Lärare i förskoleklass
Backoffice - assistent Backofficepersonal
Leg Logoped Habiliteringen Avesta Logoped
BPK Frakt i Avesta söker chaufförer Fjärrbilsförare
Socialsekreterare till försörjningsstöd vuxen Socialsekreterare
Timvikarie vid behov Städare/Lokalvårdare
Hermods söker en MA - lärare Lärare i gymnasiet
Hermods söker en SV / SH - lärare Lärare i gymnasiet
Ekonom på folkhögskola Ekonomichef
No , sv , ma - lärare år 1 - 3 Skogsbo skola Lärare i grundskolan, årskurs 1-3
Västerås 73 km
Örebro 136 km​